तरकारीको मूल्यले आकाश छोयो ? किन बढ्यो त मूल्य ? - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
२२ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंमा तरकारीको मूल्यले नयाँ रेकर्ड राखेको छ । आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रहेकै अवस्थामा तरकारीको मूल्य आकासिएको हो ।
सामान्य अवस्थामा यसरी अधिकाशं तरकारी एकैपटक तरकारी महंगो विन्दुमा पुगेको थिएन । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठका अनुसार तरकारीको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेर लगातार बढ्दो क्रममा देखिएको पहिलोपटक हो ।
‘तरकारीको मूल्य घटबढ भइरहन्छ । केही तरकारीले त मूल्यमा रेकर्ड नै राखे’ श्रेष्ठले भने, ‘ मूल्य दैनिक रुपमा घट्ने/बढ्ने हुनुपर्ने हो तर, यो पटक बढेको बढ्यैछ । तिहार अघिदेखि महंगो भएको तरकारीको मूल्य अझै घटेको छैन । ‘
अहिले अधिकांश तरकारी किलोेको सय रुपैयाँ घटीमा पाइन छाडेको छ । कालिमाटी बजारमै मूल्य उच्च भएपछि खुद्रा बजारमा मूल्य अनियन्त्रित बनेको छ ।
अहिले बजारमा स्याउ भन्दा गोलभेँडा महंगो भएको छ । कालिमाटी बजारमा गोलभेँडाको खुद्रा मूल्य किलोको १२० रुपैयाँ पुगेको छ । खुद्रामा एक सय ५० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।
सेतो आलुको मूल्य किलोको ७० रुपैयाँ रहेको कालीमाटी बजारमा काउलीको मूल्य ११० रुपैयाँ पुगेको छ । कालिमाटीमा बोडी र मटरकोशा किलोको १३० रुपैयाँ पुगेको छ । हरियो प्याज १४० रुपैयाँ प्रतिकेजी छ ।
कालिमाटी बजारमा काठमाडौंकै सबैभन्दा सस्तो तरकारी पाइन्छ । यहाँबाट नै खुद्रा विक्रेताले लगेर विक्री गर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य योभन्दा उच्च हुन्छ ।
रायोका साग नै मुठाको ५० भन्दा बढी तिरिरहेका छन्, उपभोक्ता । आलूकै मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको छ ।
कालिमाटी बजार विकास समितिको भनाइलाई मान्ने हो भने उत्पादन कम भएर नै मूलयवृद्धि उच्च भएको हो ।
भारतबाट आउने सुकेका तरकारी महंगिएको बताउँछन् समितिका उप-निर्देशक श्रेष्ठ । ‘यो वर्ष धेरै वर्षा भयो । त्यसले तरकारी बालीहरु प्रभावित भए । त्यसैले मागअनुसार बजारमा तरकारी आउन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तरकारीको मूल्य घट्दै नघट्नुको कारण पनि यही हो ।’
समितिले अझै केही समय तरकारीको मूल्य नघट्ने अनुमान गरेको छ । तरकारीमा लगातार मूल्यवृद्धि भइरहँदा तरकारी उत्पादकहरुले भने राहत पाएका छन् । काठमाडौंमा तिहार अघिदेखि लगातार तरकारीको मूल्य बढिरहेको छ ।